Goynta Laser ee Nylon, Polyamide (PA) iyo Ripstop Textiles - Goldenlaser
Goynta Laser ee Nylon, Polyamide (PA) iyo Ripstop Textiles
Xalka Laser ee nylon, Polyamide (PA)
Goldenlaser wuxuu bixiyaa mashiinnada goynta laser ee dharka nylon, oo loogu talagalay shuruudaha wax -ka -qabashada gaarka ah (tusaale, noocyo nylon oo kala duwan, cabbirro kala duwan iyo qaabab).
Nylon waa magac guud oo loogu talagalay dhowr polyamides synthetic. Maaddaama ay tahay fiyuus isku-darka macmalka ah oo laga soo saaray badeecadaha batroolka, nylon waa mid aad u xoog badan oo dabacsan, taas oo ka dhigaysa fiber ay u badan tahay inuu ku sii jiro wax-soo-saarka iyo isticmaalka. Laga soo bilaabo moodada, baarashuutka, iyo jaakadaha milatariga ilaa roogagga iyo boorsooyinka, nayloon waa fiber aad waxtar u leh codsiyo badan.
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah tallaabooyinka waaweyn ee ku jira hannaanka wax -soo -saarka, habka aad u go'aansato inaad u gooyso alaabtaada waxay saamayn weyn ku yeelan doontaa tayada alaabtaada dhammaatay. Habka alaabtaada loo gooyo waa inay ahaataa mid sax ah , hufan iyo dabacsanaan , taas oo ah sababta goynta laser si dhaqso ah u noqotay mid ka mid ah hababka ugu badan ee loo adeegsado warshadaha wax soo saarka.
Faa'iidooyinka isticmaalka goynta laser si loo gooyo nylon:
Cidhifyada goynta aan-lahayn
Goynta saxda ah ee naqshad adag
Laser goynta qaabab waaweyn
Cidhifyada goynta oo nadiif ah oo siman - baabi'inaya baahida loo qabo in la xoqo
Majiraan maro ku dhexjirta fiilooyinka dardaro sababtuna tahay sameynta geesaha isku -dhafan
Habka aan xiriirka lahayn wuxuu yareeyaa qalloocinta iyo dhalanrogidda dharka
Saxnaan aad u sareysa iyo soo noqnoqoshada sare ee goynta wareegyada
Naqshadaha ugu qallafsan waxaa lagu dhammayn karaa goynta laser
Hab fudud oo ay ugu wacan tahay naqshadeynta kombiyuutarka oo isku dhafan
Looma diyaarin qalab ama qalab xirmo
Faa'iidooyinka dheeraadka ah ee nidaamyada goynta dahabka:
Ikhtiyaarrada kala duwan ee cabbirka miiska - qaababka shaqada ayaa loo habeyn karaa marka la codsado
Nidaamka Gawaarida si buuxda otomaatig ah loogu farsameeyo dharka si toos ah uga duub liiska
Awood u leh farsamaynta qaabab dheeri ah oo dheer-dheer oo sii wadaya gogol-la'aanta sii wadida goynta
Daloolin qaab ballaaran ah oo lagu xardho aagga waxsoosaarka oo dhan
Dabacsanaan sare iyada oo la isku darayo gantry iyo nidaamyada laser Galvo hal mashiin
Laba madax iyo madax madax laba madax ah ayaa loo heli karaa si loo wanaajiyo waxtarka
Nidaamka aqoonsiga kaamerada ee goynta qaababka daabacan ee nylon ama Polyamide (PA)
Macluumaadka ku saabsan qalabka nylon iyo habka goynta laser:
Ereyga nylon wuxuu tilmaamayaa qoys polymer ah oo loo yaqaan polyamides toosan. Waa caag ku jira alaab -maalmeedka laakiin sidoo kale waa fiilo -sameynta dharka. Nylon waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah fiilooyinka isku -darka ugu waxtarka badan adduunka, iyada oo codsiyada ay ku kala duwan yihiin dhaqdhaqaaqyada nolol -maalmeedka ilaa warshadaha. Nylon wuxuu leeyahay awood aad u fiican iyo iska caabinta abrasion sidoo kale wuxuu leeyahay soo kabsasho laastik ah oo cajiib ah, taas oo macnaheedu yahay in marooyinka lagu fidin karo xadka iyada oo aan lumin qaabkooda. Asal ahaan waxaa soo saaray injineerada DuPont badhtamihii 1930-meeyadii, naylon markii hore waxaa loo adeegsaday ujeeddooyin millatari, laakiin isticmaalkeeda ayaa tan iyo markaas kala duwanaa. Tiro badan oo ah noocyo kala duwan oo ah dhar nylon ayaa loo sameeyay si loo helo guryaha looga baahan yahay adeegsi kasta oo loogu talagalay. Sidaad u sheegi karto, dharka nylon waa ikhtiyaar waara oo aad u hooseeya ee warshadaha dharka.
Nylon waxaa si weyn loogu adeegsadaa badeecooyin kala duwan, oo ay ku jiraan dharka dabaasha, gaagaaban, surwaalka dabka, xirashada firfircoon, dabaylaha, draperies iyo gogosha sariirta iyo jaakadaha aan xabbadu karin, baarashuutka, dharka dagaalka iyo jaakadaha nolosha. Si badeecadan kama dambaysta ahi ay si fiican u shaqayso, saxnaanta iyo hufnaanta geedi -goynta ayaa aad muhiim ugu ah habka wax -soo -saarka. Adiga oo isticmaalaya laser magaabay wiil si aad u jarto nylon, waxaad samayn kartaa jar -jarisyo, nadiifin nadiif ah oo sax ah oo aan lagu gaari karin mindi ama feer. Iyo goynta laser -ku waxay shaabadeysaa cidhifyada dharka badankooda, oo ay ku jiraan nayloon, oo gebi ahaanba meesha ka saareysa dhibka kufsiga. Intaa waxaa dheer, mashiinka goynta leysarka wuxuu bixiyaa dabacsanaan ugu badan iyadoo la yareynayo waqtiyada wax -qabadka.
Naylon cut laser ayaa loo isticmaali karaa codsiyada soo socda:
• Dharka iyo Dharka
• Dharka Ciidan
• Dharka Takhasuska leh
• Naqshadda Gudaha
• Iyo wax ka badan!
Mashiinnada laser CO2 ee soo socda ayaa lagula talinayaa goynta nylon:
Mashiinka Jarida Laser-ka
CO2 flatbed magaabay wiil laser waxaa loogu talagalay duub ballaaran dharka iyo qalabka jilicsan si toos ah oo joogto ah goynta.
Ultra-dheer Miis Size Laser magaabay
Takhasuska 6 mitir ilaa 13 mitir cabirrada sariirta ee agabka dheeraadka ah, teendhada, shiraaca, baarashuudka, barxadda, saqafka, qorraxda, roogagga duulista…
Mashiinka Lasvo Galvo & Gantry
Galvanometerku wuxuu bixiyaa xardho xawaare sare, daloolin iyo goynta walxaha khafiifka ah, halka XY Gantry u ogolaanayo ka shaqeynta keydka dhaadheer.
Miyaad jeceshahay inaad hesho ikhtiyaarro badan iyo helitaanka nidaamyada leysarka dahabka ah iyo xalka hababka ganacsigaaga? Fadlan buuxi foomka hoose. Khabiiradayada ayaa had iyo jeer ku faraxsan inay ku caawiyaan oo si degdeg ah kuugu soo laaban doona.